ဘယ်သူက 912041600 | Androidsis
ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ္စမတ်မှ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်သာ ဝေးကွာပြီး ကုမ္ပဏီအမျိုးမျိုးမှ ပရိုမိုးရှင်းများနှင့် ကမ်းလှမ်းချက်များကို စီးပွားဖြစ်ခေါ်ဆိုမှုများသည် ယခုအချိန်တွင် စတင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ပေါ်တွင် အလွန်ရှာဖွေထားသော တယ်လီဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုရှိသည်၊ သင့်ခေါ်ဆိုမှုကို လက်ခံရရှိသူ အများအပြားရှိသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေကြသည်၊၊ 912041600, Madrid မှ ၎င်းတို့၏ခေါ်ဆိုမှုကို လက်ခံရရှိပြီးဖြစ်ကာ ၎င်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာကို သိရှိလိုပါက၊ အောက်တွင် သင့်အား ရှင်းပြပေးပါမည်။
ဒါပေမယ့် 912041600 က ဘယ်သူလဲ ၊ သူက ဘာလို့ ငါတို့ကို ဖုန်းခေါ်တာလဲ။ ဤမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် ကွဲပြားခြားနားသောရွေးချယ်စရာများကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရတော့မည်ဖြစ်သည်။
1 912041600 က ဘယ်သူဖြစ်ပြီး ဘယ်နံပါတ်နဲ့ သက်ဆိုင်ပါသလဲ။
912041600 က ဘယ်သူဖြစ်ပြီး ဘယ်နံပါတ်နဲ့ သက်ဆိုင်ပါသလဲ။
အဲဒါကိုတွေ့ဖို့ အမြန်ရှာဖွေလိုက်ပါ။ နံပါတ် 912041600 သည်ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတွင်အလိုအပ်ဆုံးနံပါတ်ဖြစ်သည်။. ပထမနံပါတ်သုံးခုကို အာရုံစိုက်ခြင်းဖြင့်၊ ၎င်းသည် Madrid မှ နံပါတ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုပါသည်။
ကောင်းပြီ၊ ဒီနောက်ကွယ်မှာ ဘယ်သူက Vodafone ကုမ္ပဏီထက် မနည်းပါဘူး။ ၎င်းသည် 912016240 သို့မဟုတ် 912135900 နှင့် 630305510 ကဲ့သို့သော အခြားနံပါတ်များနှင့်လည်း အလုပ်လုပ်ပါသည်။ အဆိုပါနံပါတ်များမှ ဖုန်းခေါ်ဆိုရန် ရည်ရွယ်ချက်မှာ အတူတူပင်ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများအား အစီအစဉ်အသစ်များ၊ ပရိုမိုးရှင်းများ၊ နှုန်းထားများကို ပေးဆောင်ကာ သင်သည် ဖောက်သည်ဖြစ်စေ မရှိသည်ဖြစ်စေ ၊ မင်းသူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကိုပြောင်းဖို့ကြိုးစားပါ။ ၎င်းတို့၏ ဖုန်းခေါ်ဆိုချိန်များနှင့် ပတ်သက်၍ အတိအကျ ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ၊ အနည်းဆုံး စပမ်းဆန့်ကျင်ရေး စာမျက်နှာများနှင့် ဖိုရမ်များရှိ အသုံးပြုသူ အမျိုးမျိုးမှ ပေးဆောင်သည့် အချက်အလက်အရ အနည်းဆုံး အချိန်မရွေး သင် လက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်။
ဒါကြောင့်, Vodafone utiliza el 912041600 como forma para contactar contigo y ofrecerte tus productos. Por lo que hemos podido comprobar, principalmente usan dicho número de teléfono para hacerte ofertas relacionadas con Lowi, la operador de bajo coste del gigante ingles y que ofrece unas tarifas muy atractivas. El problema es que, con esas llamadas lo que provocan es el efecto contrario: que no quieras contratar absolutamente nada con ellos
También sería muy interesante que te apuntasesala Lista Robinson. Como indica nuestro compañero ဤဆောင်းပါး၌ «A la «Lista Robinson» también se la conoce como «ficheros de exclusión» y básicamente, se trata de una base de datos integrada por personas que no desean recibir publicidad por correo electrónico, llamadas telefónicas ni mensajes«. De esta manera, evitarás que te sigan llamando constantemente para ofrecerte toda clase de servicios que no te interesan en absoluto.
အကယ်၍ သင်သည် ဤဖုန်းနံပါတ်များထဲမှ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုကို လက်ခံရရှိပြီးဖြစ်ပါက ၎င်းတို့ကမ်းလှမ်းနိုင်သည့်အရာများကို သင်စိတ်မဝင်စားပါက ၎င်းကို ပိတ်ဆို့ရန် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။၎။ ပြီးတော့ ဒီအတွက်၊ မင်းမှာ အဲဒါကိုလုပ်ဖို့ နည်းလမ်းပေါင်းများစွာရှိတယ်။
ဤနံပါတ်များထဲမှ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ၊ Vodafone နှင့် Lowi အခြေစိုက်စခန်းမှ သင်၏ဒေတာအားလုံးကို ဖျက်ရန် အော်ပရေတာအား တောင်းဆိုရပါမည်။ ဤတောင်းဆိုမှုပြီးနောက် ကုမ္ပဏီမှ သင့်အား ထပ်မံခေါ်ဆိုပါက၊ ၎င်းတို့သည် ဒေတာကာကွယ်ရေးဥပဒေအား ချိုးဖောက်မှုအတွက် ပြစ်မှုကျူးလွန်မည်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » 912041600 က ဘယ်သူက ခေါ်တာလဲ။